Power Supply Protection - China BST (kong) Industrial
Ratidza Power Supply
450W Single Output Achitaurazve Simba Supply IRS-450w
125W Quad Output Achitaurazve Simba Supply ITQ-125W
75W Dual Output Achitaurazve Simba Supply IRD-75W
50W Triple Output Achitaurazve Simba Supply ITT-50W
Pane zvimwe zvinhu zvakati kuti matambudziko simba-zvitengeswa oparesheni. Pakati ava avo vakashandisa kudzivirira romugove, ayo akanyorwa pazasi.
Overcurrent : A kukundikana muoti kunokonzerwa goho mutoro ano kuti mukuru kupfuura chaiyo. Zvinonzi parinoperera kufadza kuitika kugona simba nerubatsiro uye kudzora munyika kudzivirira matunhu. Kunogona kukuvadza simba nerubatsiro mune zvimwe zviitiko. Pfupi mumatunhu pakati simba-romugove goho uye pasi anogona kusika dzenzvimbo mukati hurongwa padzinogumira chete vaifanira ano kugona uye munyika impedance simba rive. Pasina vakaomerwa, ichi yakakwirira ano zvinogona kukonzera overheating uye kukuvadza simba rive pamwe mutoro uye interconnects ayo (dunhu akadhindwa pepuranga zvisaririra, netambo). Saka, vakawanda simba rinopiwa vanofanira kuitika vakaomerwa (overcurrent kudzivirirwa) kuti zvaanopa simba kana goho razvino kwazvo yakati kunonyanyisa.
Overtemperature: A tembiricha kuti iri pamusoro simba rive raMwari yakanatsa ukoshi anofanira kudziviswa kana zvinogona kukonzera simba-zvitengeswa kukundikana. Kunwisa uchishandisa tembiricha inogona kukuvadza ine simba romugove uye matunhu chokuita nayo. Saka, zvinhu zvakawanda anoshandisa tembiricha Switch uye kuyeuka mumatunhu chokukuvadza romugove kana ayo uchishandisa tembiricha kwazvo kuchiitirwa ukoshi. Zvikurukuru, semiconductors akashandiswa wedzerai vari pangozi kutonhora kupfuura zvavo wainyatsotaura pakunogumira. Zvokushandisa zvakawanda zvinosanganisira kudzivirirwa overtemperature kuti anochinja kure romugove kana tembiricha akapfuudza yamunenge muganhu.
Overvoltage: Izvi kukundikana muoti kunoitika kana goho voltage anoenda pamusoro yakanatsa DC kukosha, unogona iyo kumanikidza kunyanya DC voltage kuti zvinokanganisa mutoro matunhu. Kazhinji, zvemagetsi maitiro mitoro angakudzivisai kusvika 20% overvoltage pasina kumutsa chero zvechigarire. Kana iri hanya, sarudza dura kuti waanodzikisira ngozi iyi. Zvokushandisa zvakawanda zvinosanganisira kudzivirirwa overvoltage kuti anochinja romugove kure kana goho voltage kwazvo yakati uwandu. Imwe nzira iri crowbar zener diode kuti anoitisa zvakakwana pari panguva overvoltage chikumbaridzozve zvokuti zvaanopa simba simba-romugove kuitika vakaomerwa uye kunozvifumbira pasi.
Soft Start: Inrush ano kukamurwa kungadiwa kana simba riri akatanga kushanda kana apo mapuranga itsva dziri kupisa plugged. Kazhinji, izvi zvinoitwa munhu munyoro-kutanga redunhu kuti DZEMUNHU DZINODZORA kutanga kuwedzera kuitika uye rinobvumira muupenyu oparesheni. Kana akasiya untreated, kuti inrush razvino anogona vaunze yakakwirira yepamusorosoro kuchaja kuitika kuti izvi zviri goho voltage. Kana ichi chinokosha hanya, sarudza dura iri rutivi.
Undervoltage Lockout: Rizivikanwe sezvo UVLO, zvinoitika kugoverwa pamusoro kana zvasvika yakakwirira zvakakwana chiyamuro voltage uye anotendeuka kure nerubatsiro kana mazano voltage rikawira pasi mumwe ukoshi. Nyaya iyi iri kushandiswa kuti zvokuyamura uchishanda kubva utility simba uyewo bhatiri simba. Kana kushanda kubva bhatiri-inobva simba UVLO disables simba nerubatsiro (uyewo maitiro) kana bhatiri discharges kwazvo zvokuti anosiya zvitengeswa kuti chiyamuro voltage zvokusagona yakaderera kutendera yakavimbika oparesheni.
Remagetsi kugarisana (EMC): Kunosanganisira magadzirirwo mitoo kuti kuderedza remagetsi chipingaidzo (Ichimura). In chinja-rudzi simba rinopiwa, mumwe DC voltage ari kuchinjwa kuti Chopped kana pulsed waveform. Izvi zvinokonzera simba wedzerai vaunze yakamanikana-bhendi ruzha (Ichimura) panguva inokosha pamusoro nokuchinja kakawanda uye ayo akabatanidza harmonics. Kuti ane ruzha, vagadziri vanofanira kuderedza airatidza kana kuitiswa choutsi.
Power-zvitengeswa vagadziri kuderedza Ichimura nemwaranzi kuburikidza zvakapoteredza romugove simbi bhokisi kana mwaya yokunamisa nyaya ine esimbi zvinhu. Manufacturers vanofanirawo kuteerera womukati marongerwo pakati romugove uye wiring kuti anoenda uye kubva romugove, izvo zvinogona vaunze ruzha.
Vakawanda vakapfuudzira chipingaidzo pamusoro simba mutsetse ndiwo mugumisiro mukuru nokuchinja transistor kana goho rectifiers. With simba-chinhu kururamiswa uye zvakakodzera transformer design, maererano kupisa singi, uye Sefa design, simba-pomugove mugadziri anogona kuderedza kuitwa chipingaidzo kuitira kuti romugove anogona kuzadzisa Ichimura pamutemo sangano approvals pasina kumutsa kunyanya firita mutengo. Nguva dzose kuti vaone kuti simba-romugove mugadziri rinoita nezvaidiwa pamutemo Ichimura nemitemo.
Post nguva: Apr-23-2018